Kala badh ka mid ah duullimaadyada Airbus ma ahan ammaan sida ay sheegtay Qatar Airways
Location: Bogga ugu weyn » Soo dirida » Aviation » Kala badh ka mid ah duullimaadyada Airbus ma ahan ammaan sida ay sheegtay Qatar Airways
Diyaaradda Airbus ayaa soo rogtay dalab diyaaradeed oo cusub oo ka yimid Qatar Airways
Khilaafka sii xumaanaya ee ka dhashay go’doominta diyaaradda A350, Qatar Airways waxay joojisay aqbasho dheeraad ah oo ay ka aqbashay diyaaradda ballaaran ee ka timid Airbus ilaa dhibaatada la xalliyo xaalufka dusha sare ee fiyuuska bannaanka.
Ka dib markii Qatar Airways ay joojisay ku dhawaad ​​kala bar diyaaradaheeda A350 oo ay la wareegtay khilaafka Airbus Maxkamadda Sare ee London, diyaaradda Yurub waxay ku dhawaaqday inay "joojisay" qandaraas ay la gashay mid ka mid ah "saddexda waaweyn" ee gobolka Khaliijka ee qaada 50 diyaaradood oo hal-mar ah A321neo.
Waxaa cirka isku sii shareeray khilaafkii ka dhashay soo ridista diyaaradda A350. Qatar Airways waxa ay joojisay in ay aqbasho keenista diyaarada Airbus ilaa dhibaatada la xalliyo xaalufka sagxadaha fiyuuska dibadda.
Shirkadda weyn ee hawada sare ayaa qiratay in uu jiro xaalufka ranjiga, kaas oo soo bandhigi kara mesh bir ah oo diyaaradaha ka ilaalinaya biriqda.
Laakiin Airbus ayaa sheegay in arrintu aysan wax dhibaato ah oo badqabka hawada ah keenayn.
Qatar Airways waxay dalbadeen $618 milyan oo magdhow ah, oo lagu daray $4 milyan oo dheeraad ah maalintii maalin kasta diyaaradaha A350 ayaa shaqo la'aan lagu hayaa.
Taa beddelkeeda, Airbus Waxa uu qaaday tallaabo la yaab leh oo uu ku joojinayo dalabka Qatar Airways ee balaayiin doollar ah ee 50 diyaaradood, “si waafaqsan xuquuqdeeda.”
Sida laga soo xigtay diyaariyaha diyaaradda, waxay joojisay amarkii A321neo sababtoo ah Qatar Airways waxa ay ku fashilantay waajibaadkeedii qandaraaska iyada oo diiday in ay qaado diyaarado A350 ah.
Dalabka ayaa qiimihiisu ka badnaa 6 bilyan oo doolar qiimaha buugaagta, in kasta oo shirkadaha diyaaradaha inta badan laga dalaco wax ka yar iibsiyada waaweyn.
Labada shirkadood ayaa dhageysigoodii ugu horreeyay maanta oo Khamiis ah ka dhacay maxkamadda sare ee London.
Dhageysi cusub ayaa loo mudeeyay usbuuca Abriil 26.
Airbus Maxkamadda London Qadar Qatar Airways
Maamulaha guud ee kooxda Ethiopian Group oo ku dhawaaqay hawlgab wakhti hore ah